I-China inyanzelisa ukondla abavelisi bomatshini bokuthambisa kunye nabathengisi | Oomatshini abazizityebi
Isilinda sesinyithi, esenziwe ngokubanzi ngesinyithi se-alloy okanye umbhobho wentsimbi odityanisiweyo ovalwe ngentsimbi ye-alloy enganyangekiyo ngobushushu, enganyanzelekanga ngoxinzelelo, eyomeleleyo, enxiba enganyangekiyo, kunye nenganyangekiyo.
(2) umphanda: Sisilinda sesinyithi, esenziwe ngokubanzi ngesinyithi se-alloy okanye umbhobho wentsimbi odityanisiweyo ovalwe ngentsimbi ye-alloy enganyangekiyo bubushushu, enganyangekiyo ngoxinzelelo oluphezulu, eyomeleleyo, enxiba enganyangekiyo, kunye nenganyangekiyo. Umgqomo kunye nesikrufu ziyahambelana ukuqonda ukutyunyuzwa, ukuthamba, ukunyibilika, ukufakelwa kweplastikhi, ukukhupha kunye nokuxinana kweplastikhi, kunye nokuhanjiswa okuqhubekayo kunye nokufanayo kwezinto zerabha kwinkqubo yokubumba. Ngokubanzi, ubude bombhobho buphinda-phinda ka-15 ukuya kuma-30 ububanzi, ukuze iplastiki itshiswe ngokupheleleyo kwaye iplastishwe njengomgaqo.
(3) Hopper: Emazantsi hopper lixhotyiswe isixhobo cut-off ukulungisa nokunqumla ukuhamba izinto. Icala le hopper lixhotyiswe ngomngxunya wokubona kunye nesixhobo sokulinganisa.
(4) Intloko yomatshini kunye nokuvunda: Intloko yomatshini yenziwe ngengalo yangaphakathi yentsimbi kunye nomkhono wangaphandle wentsimbi. Intloko umatshini kufakwa ngumngundo bokwakha. Umsebenzi wentloko yomatshini kukuguqula ukunyibilika kweplastiki okunyibilikayo kube sisindululo esifanayo somgama, esifana kwaye sizinzile. Khokelela kumkhono wokubumba, kwaye unike iplastiki uxinzelelo oluyimfuneko yokubumba. Iplastikhi yenziwe iplastikhi kwaye idityaniswe emgqonyeni, kwaye zihamba ziye ekubumbeni okufayo kwintamo yediski ngokusebenzisa ipleyiti yokuhluza enobushushu ecaleni kwendlela ethile yokuhamba. Isiseko sokufa kunye nomkhono wokufa ulungelelaniswe ngokufanelekileyo ukwenza umsantsa we-annular kunye necandelo elinqamlezileyo, ukuze inyibilike iplastikhi ikwindawo yokubhabha eqhubekayo kunye eshinyeneyo eyenziwe ngocingo oluphambili. Ukuqinisekisa ukuba indlela yeplastikhi yokuhamba ekufeni inengqiqo kwaye ishenxisa i-engile efileyo yeplastiki eqokelelweyo, umkhono we-shunt uhlala ufakwa. Ukwenzela ukuphelisa ukuhla koxinzelelo ngexesha lokukhutshelwa kweplastiki, kufakwe umsesane wokulinganisa uxinzelelo.
(5) Umphanda womatshini ophambili wamkela ukufudumeza kombane, kwaye ukupholisa amanzi kulawula ngokuzenzekelayo ubushushu bombhobho. Isiseko sokujija sinokupholiswa ngamanzi (ioyile) ukulawula ubushushu besikrufu. Intloko yomatshini ixhotywe ngenzwa yoxinzelelo kuvavanyo lobushushu kunye noxinzelelo.
Umphezulu wokupholisa umoya opholileyo ukusika ngokuzithandela, umatshini oncedisayo wegranulating, kunye nebala elijikelezayo eliqhutywa yimoto ye-AC, umgaqo wokuhamba kwesantya sokuguqula Inkqubo yokumisa ukomisa amanzi emzimbeni yenziwa yicrifrator yedihydrator, idrama eshukuma isikrini, umgqomo wokugcina ovuthelwa ngumoya njalo njalo.
1. Isikulufa esinegubu elinye sidibanisa ukuhambisa, ukondla, ukukhupha, ukufudumeza umoya opholileyo oshushu, kunye nokupholisa ukondla komoya ukufezekisa ukusebenza okuzenzekelayo okuqhubekayo. I-granulator eyodwa-screw inemveliso ephezulu yokusebenza;
2. Isikulufa esinegubu elinye linamacandelo okuxuba, okondla kunye nawokukhupha ngaphakathi. Ngokokukhetha komthengi, ukufudumeza ngombane, ukufudumeza umphunga okanye itekhnoloji yokuhambisa ubushushu ngeoyile enokusetyenziswa. Ngokweemfuno zolawulo lobushushu, iimfuno zobushushu zikwasekwe kwizinto ezahlukeneyo eziza kwenziwa. Yahlukile.
3. Umxhubi wamkela itekhnoloji "yegumbi lokudibanisa elinemacala amane elinxibayo elinxibayo", elinobuchule obuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuncinci, ukufezekiswa kweplastikhi kunye nokusasazeka okufanayo;
4. Isixhobo sokondla samkela itekhnoloji yobuchwephesha yenkampani, enokunceda ekuxubeni kwezinto ezixubileyo kwaye inyanzelise ukondliwa kwe-screw extruder enye ukuphucula ukusebenza kunye nomgangatho wegranulation;
5. Zombini ezi zixhobo zimbini zokujija kunye nesikere esinye siqhutywa yitekhnoloji yokuguqula amaza e-AC, enokuziqhelanisa neemfuno ezahlukeneyo zetekhnoloji;
6. Umphambili wentloko yomatshini wamkela isixhobo esitshintshayo esitshintsha ngokukhawuleza, esigcina ixesha kunye nomzamo kwaye sihambelana nokusingqongileyo;
7. I-granulator yamkela intloko yokusika ejikelezayo kunye nesixhobo esihle sokucoca i-granulation eshushu yomoya opholileyo;
8. Ukupholisa iipellets kuhambisa isahluli sesahlulo sokuhambisa kunye negubu kupholile okanye idiski eshukuma isikrini;
9. Inkqubo yolawulo lombane yamkela i-PLC, ujongano olubonakalayo kunye netekhnoloji yokuguqula rhoqo ukuze ifumane inkqubo epheleleyo yolawulo oluzenzekelayo.